ဘက်တီးရီးယား ကင်းစင်တဲ့ လက်တွေဖြစ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ ဆေးကြော သင့်သလဲ? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
သင့်ရဲ့ လက်တွေ သန့်ရှင်းရဲ့လား? သေချာတာကတော့ သင် အိမ်သာကထွက်လာတိုင်း လက်ဆေး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်လက်တွေကို ဆေးကြောတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက် ထိရောက်မှု ရှိလဲဆိုတာကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။
သိရှိဖို့ ကျန်နေတာတစ်ခုက လက်ကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပြီး ရင် အ၀တ်ခြောက်နဲ့ သုတ် ရမလား ၊ Dryer အသုံးပြုရမလားဆိုတာပါ။ သေချာတာကတော့ ရေစိုနေတဲ့အတိုင်းလက်ကို ထားလို့မရပါဘူး။ ရေစိုနေတဲ့ လက်တွေဟာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း အနုဇီဝ ပိုးမွှားတွေတွယ်ကပ်နေပြီး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ လက်တွေကတော့ ၀.၀၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကပ်တွယ်နေတာကြောင့် လက်ကို သေချာပေါက် အခြောက်ခံဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ အကောင်းဆုံး ကတော့ အ၀တ်ခြောက်နဲ့သုတ်လိုက်တာပါ။ အ၀တ်ခြောက်နဲ့ စိုစွတ်နေတဲ့လက်ကို သုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လက်ဆေး စဉ်က မကုန်စင်သွားပဲ ကပ်တွယ်ကျန်ရစ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အလိုလျောက် အခြောက်ခံတဲ့ စက်တွေကတော့ ဘက်တီးရီးယား ထပ်မံ ကပ်တွယ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးနည်းသွားစေပေမယ့်လည်း လက်ကို ခြောက်သွေ့သွားစေတဲ့အပိုင်းမှာ ကြာရှည်နေတာကြောင့် စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေဟာ မိမိ အ၀တ်နဲ့ အနည်းငယ်စိုစွတ်မှုကို သုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာလည်း လက်မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေက ပြန်ကပ်လာပြန်ရော။